Methods विधिले घरेलु कृत्रिम हिउँ बनाउनका लागि - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> गृह प्रयोगहरू >> कृत्रिम हिउँ कसरी बनाउने
यी अवयवहरू हुन् जुन हामी सबै प्रयोगका विधिहरूका लागि प्रयोग गर्न लाग्यौं।
शेभिंग फोम (€ ०.0,9 ०)
सोडियम बाइकार्बोनेट (€ ०.0,8)
कोर्नस्टार्च (€ २.२)
कन्डिसनर (जसको हामीसँग घरमा छ, यो धेरै थोरै प्रयोग गरिन्छ)
डायपर र / वा सोडियम पॉलीक्रिलेट
म एउटा भिडियो छोड्छु जुन मैले विभिन्न प्रकारको हिउँमा गरेको छु र प्रक्रिया अझ स्पष्ट देख्न सकिन्छ। डायपर विधि मैले अन्तिमका लागि बचत गरेको छु। मसँग केहि अधिक भिडियोहरू तैयार छन् जुन म ब्लग पोष्टहरूमा स्वतन्त्र रूपमा पोष्ट हुनेछु। त्यसैले म तिमीलाई छोडछु यो लिंक तपाइँको युट्यूब च्यानलको सदस्यता लिन को लागी
विधि १ - डायपरको साथ
सिद्धान्त एकदम सजिलो छ, हामीले यसलाई सयौं वा हजारौं इन्टरनेट साइटमा हेर्‍यौं र पढ्यौं। हामी धेरै डायपर लिन्छौं, त्यसलाई खोल्छौं र कपास बाहिर निकाल्छौं जुन पेशाबलाई अवशोषित गर्दछ। यो सोडियम पॉलीक्रिलेट संग मिश्रित छ।
Polyacrylate एक पोलीमर हो कि यसको मात्रा को 500०० पटक सम्म अवशोषित गर्न सक्छन् र जब यो पानी समातिन्छ यो हिउँ जस्तै धेरै छ।
तर यो सिद्धान्तमा व्यावहारिक रूपमा सरल छ मैले केही समस्याहरू पाएको छु, जुन मैले कसैलाई टिप्पणी गरेको देख्दिन। हुनसक्छ यो म हुँ जो अशुभ थियो।
पोलीक्रिलेट कपास फाइबरको साथ मिश्रित छ र यो अलग गर्नु मेरो लागि साँच्चिकै बोझो भएको छ। मैले दुईवटा लंगोटहरू प्रयास गरेको छु, एउटा वयस्कहरूको लागि अधिक र एक बच्चाका लागि सक्षम हुन र उही कुरा मलाई दुबैमा भएको छ, मैले कटन फाइबरलाई जतिसुकै खकारें, लगभग कुनै पोलिमर झर्दैन तर वरपर फ्लाफका फार्महरू तपाईं हावामा तैरिरहनु हुन्छ, कपास फाइबरले बनेको हुन्छ र मलाई पोलिमर लाग्छ। र सत्य यो हो कि मलाई यो निल्न गएको चाहन्न, मेरो छोरीहरूले सास फेर्छन् भन्ने सोचाइ कम छ।
त्यसैले मैले यो विधि त्यागें जबसम्म मैले पॉलीक्रिलेट हटाउनको लागि एक प्रभावकारी र सुरक्षित तरीका फेला पारेन। यस बीच, यदि तपाईं यो रेसिपी प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ भने, तिनीहरू यसलाई धेरै ठाउँमा बेच्छन्।
साथै हामी त्यस्तै सोडियम पॉलीक्रिलेट खरीद गर्न सक्छौं.
विधिहरू जुन मैले बच्चाको लागि उपयुक्त देख्दछु र म के भनेर राख्छु बच्चाहरूको लागि प्रयोगहरू तिनीहरू निम्न हुन्:
विधि २ - कार्नस्टार्च र फोम
यसबाट सुरू गरौं कोर्नस्टार्च र शेभिंग फोम रेसिपी.
मइजेना राम्रो मकैको पिठो हो, मैले यो ब्राण्ड किनेको छु तर तपाईं अरू किन्न सक्नुहुनेछ, सामान्य पिठोको भिन्नता यो हो कि यो एकदम राम्रो छ, यो धेरै सिभ गरिएको छ।
हामी मिश्रणको कुनै सटीक अनुपात दिदैनौं। यहाँ हामी केवल कर्नस्टार्च र फोम थप्न जाँदैछौं र हामी हिउँमा इच्छित बनावट प्राप्त नगरेसम्म मिक्स गर्दछौं।
कर्नस्टार्च र फोमबाट बनेको हिउँसँग धेरै नरम स्पर्श हुन्छ जुन बच्चाहरूलाई धेरै मनपर्दछ। यो केही पहेँलो छ त्यसैले यसले वास्तविक हिउँको अनुभूति दिदैन, जस्तो कि बाइकार्बोनेटको साथ मिश्रणको साथ हुन्छ।
अन्य चीजहरूलाई ध्यानमा राख्नु भनेको यस पीठको मूल्य हो जुन € २ भन्दा बढि हो र यदि हामी एक मात्रा बनाउन चाहन्छौं भने यो बाइकार्बोनेटसँग भन्दा धेरै महँगो हुनेछ। दाग पनि यो कुनै बढि बढाइमा वर्णन गरिएको छैन, र यो सजीलै जान्छ, तर यो जहाँ तपाईं छुन्छ दाग।
विधि - - बेकिंग सोडा र दाह्री फोमको साथ
निम्न नुस्खा संग छ बेकिंग सोडा र दाह्री फोम। तपाईमले देख्न सक्नुहुने जस्तै, सेभिंग फोम घर प्रयोगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ, यस प्रकारको हिउँदेखि विभिन्न प्रकारका स्लिमसम्म।
सोडाको बाइकार्बोनेट खरीद गर्दा, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि किलो किता झोलाहरू लिनुहोस्, जुन एकदम सस्तो छ, यसको लागि मलाई 80० वा 90 ० सेन्ट लाग्छ। यदि हामी प्लास्टिकको क्यान लिन्छौं भने त्यहाँ धेरै कम मात्रा हुन्छ र यो महँगो मूल्यवान छ।
पद्धति कोर्नस्टार्चको जस्तै छ, हामी बाइकार्बोनेट, फोम थप्छौं र हामी मिक्स गर्छौं र हामीलाई चाहिएको कुराले पूरा गर्छौं। यदि यो धेरै चिल्लो छ भने हामी अधिक बाइकार्बोनेट राख्छौं यदि यो अति नरम छ कि यसलाई कम्पेक्ट गर्दा केहि पनि आकारमा राख्दैन किनकि हामी बढी फोम राख्छौं। र यति मा हामीले जबसम्म हामी इच्छित पोष्ट पाउदैनौं।
अघिल्लो हिउँ जस्तो नभई, यो शुद्ध सेतो हो, र यो दृश्य वास्तविक हिउँ जस्तो देखिन्छ।
विधि - - बेकिंग सोडा र पानी
र हामी केमा लाग्छौं यो मेरो मनपर्ने विधि भएको छ, केवल बेकिंग सोडा र पानी प्रयोग गरेर कृत्रिम हिउँ बनाउन.
र यो यो हो कि यो झूट देखिन्छ, यस हिसाबले हिउँ फन्कोसँग मिल्दोजुल्दो छ र कन्डिशनरको जुन हामी अन्तमा हेर्नेछौं। यति धेरै कि मैले प्लेटहरू चिनो जुन हिउँमा भण्डार गरिएको थियो; मेरा छोरीहरू खेलिरहेका थिए र त्यसपछि मलाई थाहा थिएन कि कुन थियो। म केवल एक लाई रंगको साथ Maizena संग चाँडो गर्न सक्छु।
म उनीहरूलाई चिन्नको लागि धेरै इच्छुक थिए किनकि म दिनको क्रममा प्रत्येकको विकास कसरी हुँदो रहेछ भनेर हेर्न चाहान्छु र अन्तमा उनीहरूसँग प्रयास गर्न बाहेक मसँग कुनै विकल्प थिएन किनभने मैले तिनीहरूलाई जति धेरै छोए पनि म ती भिन्नता गर्न सक्दिन। प्रत्येकमा स्पर्श अलि फरक हुन्छ, तर केहि पनि छैन जसले तपाईंलाई भन्छ कि यो धेरै नरम हो र यो फोम हो, उदाहरणका लागि।
र म यसका फाइदा लिन्छु भविष्यमा प्रयोगमा कडा हुन र चीजहरू लेख्नको लागि सम्झनुहोस्, तिनीहरूलाई राम्ररी चिन्न सकिएको छ र एक नोटबुकमा सबै कुरा लेख्नुहोस् ताकि समयसँगै वा कुनै निरीक्षणमा प्रयोगको क्रममा डाटा गुमाउनुपर्दैन।
हिउँ नुस्खा सबै को जस्तै छ, पानी र मिक्स को बाइकार्बोनेट। तपाईंले धेरै पानी हाल्नु पर्दैन।
सुरुमा मैले भने कि यो मेरो मनपर्ने हो किनकि यदि हामी धेरै त्यस्तै परिणामहरू प्राप्त गर्दछौं भने, मलाई लाग्छ कि उत्तम कुरा भनेको सरल कार्य गर्नु हो। यो सत्य हो कि बच्चाहरू यससँग कम रमाईलो गर्छन्, किनकि उनीहरू आफ्ना हातहरू फोहोर्याउन मन पराउँछन्, तर यो सबै भन्दा सस्तो संस्करण हो।
विधि - - कन्डिशनर र बेकिंग सोडा
अन्तिम विधि पहिले र प्रख्यात डायपर विधि बुझाउनुहोस्।
यस अवस्थामा हामी कन्डिशनर र बेकिंग सोडा मिक्स गर्न जाँदैछौं। यो मलाई लाग्दछ, स्टिकिस्ट विधि, किनभने फोमले धेरै टाँस्यो भने पनि स्पर्श रमाइलो छ र यो तुरुन्तै राम्रोसँग मिसिएको छ र हातबाट बाहिर जान्छ। तर कन्डिसनरले तपाईका हातहरुलाई टाँसिलो पातलो बनाउँदछ, मलाई यो धेरै मनपर्दैन, सिनाल राम्रोसँग मिसिन्छ र तपाईको हातबाट अलग हुन्छ, तर ती साबुन नै रहन्छन्।
तपाईंले थोरै रकम राख्नुपर्नेछ, मैले धेरै राखें र एउटा राम्रो टेक्सचर प्राप्त गर्न मैले धेरै कन्डिसनर राख्नुपर्‍यो।
हिउँ पहिलेको भन्दा भारी देखिन्छ, तर यो शुरुवातमा मात्र हुन्छ, जब केहि घण्टा बित्यो भने तिनीहरू सबै अविनाशी हुन्छन्।
कृत्रिम हिउँका प्रकारहरूको तुलना
यहाँ हामी डायपर वा सोडियम पॉलीक्रिलेट छोड्छौं किनकि मैले प्राप्त गर्न सकेन। मैले अझै पोलीक्रिलेटको तुलना गर्नु पर्‍यो र यसलाई तुलनामा राखें।
ग्यालरी को फोटोहरु मा4स्नूज प्राप्त छ। B बाइकार्बोनेट एक प्राइमरी भिन्न हुन सक्दैन, तर मैजेनाको लागि एकमा हेर्नुहोस्। तपाईले देख्नुहुन्छ कि यो कसरी अधिक पहेलो छ?
हिउँको निराशा २ 24 घण्टा पछि आउँदछ, मिश्रण सुख्खा छ र हामीले के छोडेका छौं भने कि हामीसँग कर्नस्टार्च वा लूज बाइकार्बोनेट छ र हामीले मिश्रण फेरि गर्नुपर्नेछ वा यसलाई हाइड्रेट गर्नुपर्नेछ कि यसले फेरि हिउँको स्थिरता लिन सक्दछ। यसैले पानीको विधि नै मलाई सबैभन्दा मनपर्‍यो।
यस सम्बन्धमा, सोडियम पॉलीक्रिलेट मलाई राम्रो लाग्दछ, किनकि मैले बुझें कि यो लामो समय सम्म रहन्छ। यो प्रयास गर्ने बित्तिकै, म तपाईंलाई ;-) बताउँछु।
समुद्री गिलास: कलेक्टरको गाइड
विभाग गृह प्रयोगहरू, बच्चाहरूको लागि प्रयोगहरू टिकट नेभिगेसन
Artificial कृत्रिम हिउँ कसरी बनाउने on मा २ टिप्पणीहरू
डिसेम्बर १,, २०१ 21 2018: १:9 अपराह्न
धन्यबाद। यो एक धेरै चाखलाग्दो लेख भएको छ।
डिसेम्बर २२, २०१ at बिहान ११::22२
तपाईलाई मन परेकोमा म धेरै खुसी छु :)
चाँडै एक चिप्लो संग ;-)
1 विधि १ - डायपरको साथ
2 विधि २ - कार्नस्टार्च र फोम
3 विधि - - बेकिंग सोडा र दाह्री फोमको साथ
4 विधि - - बेकिंग सोडा र पानी
5 विधि - - कन्डिशनर र बेकिंग सोडा
6 कृत्रिम हिउँका प्रकारहरूको तुलना